Yiba Nobugovu Ngezingosi Zokuzidela | Martech Zone
Yiba Nobugovu Mayelana Nenethiwekhi Yokuzidela
ULwesihlanu, February 12, 2010 NgeSonto, ngoFebhuwari 9, 2014 Douglas Karr
Kuleli sonto ngibe nezingxoxo ezinzima namanye amabhizinisi engiwakhathalele ngokujulile. Bayazi ukuthi ngiyabakhathalela ngoba ngibaphendulile futhi ngibenza balandise. Inethiwekhi yami ingukutshalwa kwemali kwami ​​futhi lapho ngithola khona inzuzo enkulu ekutshalweni kwemali.
Amafemu ezobuchwepheshe engisebenza nawo ahlala ethola indlebe kimi. Mina njalo bika izinkinga, imibono kanye nezidos emaqenjini abo. Kuwo wonke umuntu okhonondayo, kunamakhulu abanye abazomane bakushiye futhi bathole omunye umthengisi. Kubalulekile ukuthi, uma ubakhathalele abahlinzeki bezixazululo zakho, uba nezingxoxo ezinzima nabo ngalokho okungahambanga kahle noma kungani.
Kunamathuluzi amaningana enethiwekhi nemiphakathi engikuyona. Izingosi ziyajabulisa futhi ziyaqeda amandla. Njengebhizinisi elincane, inethiwekhi yami iyisihluthulelo sempumelelo yami. Engizungeza ngaye ngicabanga ngebhizinisi lami futhi ngiletha ibhizinisi. Amanye amanethiwekhi wami awazideli - ngaso sonke isikhathi enza konke okusemandleni awo ukuphusha ibhizinisi ethangeni lami. Ngizizwa ngikweleta futhi njalo ngisebenzisa amathuba okubuyisa umusa. Abanye banobugovu, noma kunjalo, futhi balinganisa ubudlelwane bethu kuphela ngalokho engibanikeze khona.
Imithombo yezokuxhumana isakaza inetha elikhulu. Ngihlala ngihlola lapho kufanele ngikhulume khona ngokulandelayo, ukuthi kufanele ikhokhe noma cha, noma ngabe kufanele ngithathe isikhathi nemali ohlelweni lwami ukuze ngibe lapho. Ngibukeza amapulatifomu engizobhala futhi ngiphakamise kuwo. Ngicabanga ngokubhuloga kuqhathaniswa nevidiyo kuqhathaniswa ne-podcasting. Ngicabanga ukuphawula kwamanye amasayithi nokuxhumana nabaholi bemboni. Umsebenzi omningi.
Njengomxhumanisi, nginemali encane kakhulu evela njalo, ngakho-ke iningi leholo lami litholwa ngokuthengisa isikhathi sami. Lokho kusho ukuthi yonke inkomishi yekhofi, ucingo noma i-imeyili engiyiphendulayo engozini yokulahlekelwa yimali engenayo.
Ukufuna ukwazi: Singakhiqiza kanjani uma bekufanele sikhokhelane ngawo wonke umhlangano esiba nawo komunye nomunye. Uma ngikubizela ukuphuza ikhofi, kuthiwani uma bekufanele ngikhokhe isilinganiso sakho sehora. Ngisengakubizela ikhofi?
Kubalulekile ukuthi uhlole inethiwekhi yakho njalo ukuthola ukuthi utshala imali kuphi nokuthi izokhokha noma cha. Ibhizinisi ibhizinisi, kunjalo. Yiba nobugovu ngokuthola inethiwekhi engenabugovu. Bengingeke ngiphumelele ukube bekungekhona amaklayenti ami abalulekile - Ukuhlanganiswa, ChaCha, Webtrends futhi Imininingwane ye-Walker bakulolo hlu. Ngokuthi “ukhiye”, ngisho imali engenayo;).
Njengoba ngicabanga ngalobo budlelwano nokuthi bavela kanjani, bonke bavela ebudlelwaneni bami nosomabhizinisi oyedwa - uChris Baggott. Labo abaziyo mina noChris bayazi ukuthi sihloniphana kakhulu - futhi sobabili sithembekile kakhulu komunye nomunye. UChris ungumvangeli oqothulayo - uhlala ecindezela kanzima ukuze izinkampani zakhe zigqame… okungabonakala njengokuzicabangela wena wedwa. Njengoba ngibheka impumelelo yami nohlu lwamakhasimende ami, noma kunjalo, zonke zavela ebudlelwaneni bami noChris eminyakeni edlule.
Uwathathaphi amaklayenti? Uwukhiphela kuphi umkhondo wakho webhizinisi lakho? Impumelelo yakho uyikweleta bani? Ingabe ubuyisela umusa? Ungase umangale lapho uthola lokho.
Inothi lokugcina: Lokhu okuthunyelwe akuhloselwe ukwehlisa noma imuphi omunye umuntu obaluleke kakhulu empumelelweni nasekukhuleni kwebhizinisi lami. Uyazi ukuthi ungubani! Ngiqonde nje ukukhanyisa ukuthi abanye bethu abahloli ngokweqiniso futhi bayabazisa abantu kwinethiwekhi yethu ngebhizinisi abalinikezayo. Ngicabanga ukuthi ngithathe kancane ubudlelwano bami noChris futhi angibonanga ukuthi ubaluleke kangakanani kimi.
Tags: Ukufaka uphawuIsibhamu seposiifoni
Ukuhlanganisa Amandla Wezokuxhumana Komphakathi - Mashi 16, Tampa